Shiinaha Dahaadhay Bac Aan Meel Xidhnayn / Baakid Dukaan Leh Oo Aan Xidhnayn / Soosaaraha Bacda Cute ee Caadaysan ee Loo Isticmaali Karo | Zhihongda
Bac dahaadhay Non Bag-xidhkii Non-xidhkii Bag Shopping Bag / Cute Reusable Bag Bag
Bacaha aan tollayn ayaa ah bacaha laga sameeyay dharka aan polypropylene-ka lahayn (PP). Mashiinkaani waxaa lagu sameeyaa miiqyo iyo fiber polypropylene fiber, oo jilicsan, siman oo hawo kululi kara.
Maadadani waxay ka dhigeysaa bacaha aan tolidda lahayn mid waara, soo jiidasho leh, neefsan kara, dib loo isticmaali karo, biyo u adkaysta, hypoallergenic, dab u adkaysta, jilicsan, iftiin, mararka qaarkoodna la dhaqi karo. Waxyaabaha ay ku jiraan boorsooyinkani waa kuwo xoogan oo socon kara ilaa 5 sano.
1. Bacaha aan tollayn waa bacaha laga sameeyay dharka polypropylene-ka aan-tolnayn (PP). Mashiinkaani waxaa lagu sameeyaa miiqyo iyo fiber polypropylene fiber, oo jilicsan, siman oo hawo kululi kara.
Qalabkani wuxuu ka dhigayaa bacaha aan tolmo lahayn ee waara, soo jiidasho leh, neefsasho, dib loo isticmaali karo, biyo u adkaysta, hypoallergenic, dab u adkaysta, jilicsan, iftiin, iyo mararka qaarkood la dhaqi karo. Waxyaabaha ay ku jiraan boorsooyinkani waa kuwo xoogan oo socon kara ilaa 5 sano.
3.waxay si fudud ugu daabacan yihiin astaan ​​shirkadeed iyo xayeysiin; bacaha aan dunta lahayn ayaa ah qalab aad u fiican oo sumadeynta shirkadaha waana kuwo hadiyado soo jiidasho leh.
Magaca Badeecada Hot daabacaadda logo daabacaadda caadadii dahaaray bac aan tolmo wanaagsan leh
Hore: Bacda wax iibsan ee daabacan ee daabacan, Pink Shopping Fold kubado PP dahaaray Bag aan tolmo wanaagsan lahayn
Xiga: Custom logo daabacaadda supermarket eco dib loo isticmaali karo tote shopping cagaaran Non baco leh tolmo wanaagsan
Bey'ada-kartoo daabacan pp cad non wo ...
Large dib loo isticmaali karo Raashinka Raashinka shukumaan aan tolmo wanaagsan sh ...
Shiinaha dahaaray laabma Beige Non-xidhkii Shoppi ...
Badeecada Eco-saaxiibtinimo Custo Cusbooneysiin Custo ...